Gaas iyo Guuleed oo ku kulmi doona Gaalkacyo si ay uga wadahadlaan joojinta dagaalka Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGaas iyo Guuleed oo ku kulmi doona Gaalkacyo si ay uga wadahadlaan joojinta dagaalka Gaalkacyo
November 12, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug. [Sawirka: Puntland Mirror]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa la filayaa maanta oo Sabti ah in ay ku kulmaan magaalada Gaalkacyo, sida ay ilo-wareedyada sheegayaan.
Labada madaxweyne ayaa kawadahadli doona sidii xal looga gaari lahaa colaada Gaalkacyo ee u dhaxaysa labada dhinac.
Ugu yaraan 60 qof oo u badan ciidamada dagaalamay ayaa ku dhimatay dagaalo ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo asbuucyadii lasoo dhaafay.
Ku dhawaad 80,000 dad shacab ah ayaa ku barakacay dagaalada Gaalkacy, sida ay sheegtay haayada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiyaasha.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Khamiis ah xafiiskiisa ku qaabilay maalgashadayaal ka socda dalka Shiinaha. Maalgashadayaasha u dhashay Shiinaha ayaa ka socda shirkadda U-TON HONG KONG, waxayna [...]